अन्तर्वार्ता::Best News Experience from Nepal
अयोध्या थारु अध्यक्ष सियारी गाउँपालिका,रुपन्देही स्थानीय निकायका काम कारबाही, विकास निर्माणका गतिविधिहरु के भइरहेका छन् । सरकारले भने जस्तै सिंहदबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको छ त । अखबार न्यूजको स्थानीयनिकायका गतिविधिमा सियारी गाउँपालिकाले के-कस्ता गतिविधिहरु गरेको छ यादव भुसालले गरेको कुराकानी । – स निवार्चित भएपछि सीयारी गाउँपालिकामा प्राथमिकताका साथ के के काम गर्नु भयो ? हामी निर्वाचित भएको २ बर्ष बितिसक्यो,जतिबेला हामी संघिय लोकतान्त्रिक व्यवस्था बाट निर्वाचित भएर आयौ हामी सँग कुनै ऐन...
स्थानीय निकायका काम कारबाही, विकास निर्माणका गतिविधिहरु के भइरहेका छन् । सरकारले भने जस्तै सिंहदबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको छ त । अखबार न्यूजको स्थानीयनिकायका गतिविधिमा रोहीणी गाउँपालिकाले के-कस्ता गतिविधिहरु गरेको छ यादव भुसालले गरेको कुराकानी । – स ...
विभिन्न बिमा कम्पनीहरुको भिडमा नेपालको सबै भन्दा कान्छो प्रभु जीवन बिमा कम्पनीले प्युठानमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै छ । फागुन पहिलो साता देखि बिजुवारबाट सेवा प्रवाहमा जुट्न थालेको सो कम्पनीले आफ्नो उधेश्य बारे प्रस्टाउन गत मंगलबार कम्पनीका अध्यक्ष डा. आत्मराम घिमिरेको नेतृत्वमा आएको टोलीले विभिन्न क्षेत्र सम्बन्धित व्यक्तिसंग अन्तरक्रिया समेत सम्पन्न गरेको थियो । यहि सेरोफेरोमा हामीले कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृति किशोर प्रसाद लामिछानेसंग संक्षिप्त कुराकानी गरेका थियो...
जिल्लाको गुणस्तरिय शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको महत्वपुर्ण योगदान रहेको छ । शिक्षालाई सेवा मुलक व्यवसायका रुपमा लिइने गरिन्छ । तर पछिल्लो समय शिक्षालाई सेवा भन्दा पनि व्यवसाय मुलक भएको भन्दै राज्यले कानुनमा कडाई गर्ने सुरमा छ । त्यसो त निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीसंग महंगो शुल्क लिने, बालमैत्रीको कुरा गरेपनि विद्यार्थीहरुलाई कुटेर पढाउने गरेका चर्चा हुने गरेका छन । तर, प्याव्सनले भने बोर्डिङ स्कुललाई लठ्ठी रहित बनाउने अभियानमा रहेको बताउँदै आएको...
नारी सुन्दर देखिन के के गर्नुपर्छ ? सुन्दरता नारीहरुको गहना हो । यद्यपी बाहिरबाट मात्र सुन्दर देखिएर हुँदैन, आफ्नो मन पनि सुन्दर हुनुपर्छ । सधैं सकारात्मक सोच्नु पर्छ , खुशी रहनु पर्छ अनि शरीरमा तेज र चमक आउँछ । शरीरलाई फिट एण्ड फाइन राख्नुपर्छ । पानी प्रशस्त पिउनुपर्छ , पोषणयुक्त खानेकुरा खानुपर्छ । सस्तो भन्दैमा जस्तोसुकै सौन्दर्यका सामाग्री प्रयोग गर्नु हुँदैन । सधै ब्राण्डेड सौन्दर्यका सामाग्री प्रयोग गर्नुपर्छ । आफुलाई...
दाङ सुरक्षाका दृष्टीकोणले संवेदनशील जिल्ला हो । भौगोलिक रुपमा ठुलो क्षेत्र छ । विभिन्न समयमा ठुला तथा साना विभिन्न हत्या, हिंसा,बलात्कारलगायतका घट्नाहरु घटिरहने गरेका छन । यी घट्नाहरुमा प्रहरीले सफलता प्राप्त गरेपनि कतिपय ठुला घट्नाहरुमा प्रहरीले बर्षौ अनुसन्धान गरेपनि सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा पीडित परिवारहरुले न्यायको अुनुभुति गर्न सकेका छैनन् । अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरीले जनतासँग सहकार्य गर्ने भन्दै पछिल्लो मुस्कान सहितको सेवा, जनतासँग प्रहरी,...
बुटवल । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रमुख केन्द्रका रुपमा स्थापीत रुपन्देहीमा पछिल्लो समय सबै विशेषज्ञ सेवाहरु एकैठाउँमा सिद्धबाबा सुपरस्पेशलिष्ट इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. प्रदान गर्दै आएको छ । यस क्षेत्रमा निजिक्षेत्रबाट संचालनमा आएका अस्पतालहरु मध्ये ठुलो लगानीमा संचालनमा आएको यस अस्पतालले सबै बिशेषज्ञ सेवाहरु एकै ठाउँबाट प्रदान गर्दै आएको हो । स्थापनाको छोटो समयममै अस्पतालले सर्वशुलभ गुणस्तरीय बिशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दै सबैको मन जित्न सफल भएको छ । अस्पतालमा आउँने निम्न...
गीता लामा गायिकाको रुपमा चिनिएकी छिन कल्याणपुर ५ काफलसौरा हालको साबिक बिदुर नगरपालिका १३ नुवाकोटमा चतुर तामाङ्ग अनि साइली तामाङ्गको कोखबाट जन्मिएकी उनि ७ जनाको साधारण परिवारमा हुर्केकी थिइन । लामा सानै उमेर देखीनै गाउने नाच्ने गर्ने रहर भएकी केटि हुन् गाउँका सानातिना प्रोग्रामहरु अनि मेलामा गाउने नाच्न जाने गर्थिन उनि गाउँका मान्छेहरुले उनि भित्रको कला गला देखेर हुने कार्यक्रमहरुमा लैजाने गर्थे तर पनि घरको नाजुक अवस्थाले गर्दा उनि सिलाइ...
विदेश जाने होइन, विदेशबाट पैसा नेपालमा आउँछ
रोटरी क्लव अफ बुटवलको वर्ष २०१८/१९ का लागि प्राज्ञिक व्यक्तित्व रोटरियन नारायणप्रसाद पन्थ अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । समाजसेवी एवं शैक्षिक व्यक्तित्व पन्थ त्रिभूवन विश्वविद्यालयका उप-प्राध्यापक हुन् । रुपन्देहीका दुई दर्जन बढी सामाजिक संघ संस्थामा आवद्ध उनी शिक्षा क्षेत्रको विज्ञका रुपमा स्थापित छन् । नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालयबाट विद्यावारीधि अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्याएका पन्थ विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा पठन पाठन हुने झण्डै दुई दर्जन पाठ्यपुस्तक लेखकका रुपमा पनि स्थापित छन्...
साहित्य,समाजसेवा हुँदै चिकित्सा क्षेत्र
पुर्वी नेपालका ग्रामीण समुदायमा आफ्नो सेवा प्रदान गर्दैै आउनु भएकी डा.मन्जली कुमारी यादव एक सफल स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुनु हुन्छ । रुपन्देही जिल्लाको ओमसतिया गाउँपालिकामा बुवा मातृका प्रसाद यादव र आमा रिता देवि यादवको कोखबाट जन्मनु भएकी डा.यादव समाज सेवा र साहित्यमा रुचि राख्दा राख्दै पनि चिकित्सा क्षेत्रलाई अंगालेर तराई मधेसमा महिलाहरुको स्वास्थ्य समस्याका बारेमा सेवा प्रदान गर्दै आउनु भएको छ । उहाँ संग महिलाका स्वास्थ्य समस्याकाबारेमा अखबार न्युज सहकर्मी...